ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: ခရီးတို
မော်ဒယ်ဘွိုင်းရဲ့ ဘယ်ဘက် ခြေဖနောင့်က ဘာဖြစ်လို့ မြေပေါ်မချတာလဲ။ ဟားးးး
ဘယ်သူမှန်း မသိဘူးဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်လေးက လူချောပဲဗျ၊ တချိန်တုန်းက နွား အကောင် ၂၀ နဲ့ ဝိုင်းကြီးပတ်ပတ် ကစားခဲ့ဖူးတယ် ဆိုတာ ဒီလိုဆိုတော့လည်း ယုံဖို့တောင် ခပ်ခက်ခက်ရယ်....။းD
ဒီအကက တစ်မျိုးပါလား...ရိုးရာအကလည်း မဟုတ်...မော်ဒဖိုင်း အကပဲဖြစ်ရမယ်...ထူးဆန်းပါပေ့ ကမောင်မျိုးရယ်...
အင်း ၃ ချက် နည်းထှား))) အချက် ၃၀ လောက် တီးခဲ့ရမှား))
ရုပ်ကိုက မချိုမချဉ်နဲ့ .. နင် ၃ချက်ဆို ငါက နောက် ၃ချက် .. :P တိန်တိန်တိန်
တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးသေးဘူး။ ဒီအကမျိုးလေးကို .... အစ အဆုံးကြည့်ချင်တယ်... ဒီလိုပိုစ့်မျိုးလေးတွေ တင်ပါ တင်ပါ။ အပြင်လည်း သွားရင်းပေါ့ ... စကားမစပ် ဒီကောင်လေးက ဒီလိုရယ်နေတော့လည်း ခင်ဖို့ အကောင်းသားနော် ... :)
တစ်ခြား မပြောပါဘူးး)
၃ ချက် .. ???
မိုးခါး ရိုက်တာ ၃ ချက် ... နဲ့ဆိုရင်တောင်
နည်း တောင် နည်း နေ သေး သလိုပဲ .. :D
အမလေးနော် အကလေးကို ဗီဒယိုလေးများ ရိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ တို့တွေလဲ ကြည့်ချင်တာပေါ့ဟယ်။
အဲဒီ ဘယ်သူမှန်းမသိတဲ့ကောင်လေးက နှုတ်ခမ်းမွှေးစစနဲ့ ကြောင်ပေါက်စလေးနဲ့တူပါ့ ဘယ့်နှယ်ကြောင့် ၃ချက်ကြီးများတောင် ရိုက်ခဲ့ရတာလည်းကွယ် များများလေး ရိုက်ခဲ့ရောပေါ့ ... :P
စိတ်ဝင် စားစရာ ကောင်းတဲ့ အက ပဲနော်..
မိုးယံနဲ့ ကိုလတ်ကိုပါ ခေါင်းဝိုင်းရိုက်ခိုင်းလိုက်ပါလားး))